Ndị na-emepụta akwa --lọ ọrụ akwa - China Friji Textilelọ ọrụ Ngwaọrụ na ndị na-eweta ya
Jiri agent onye na-ahụ maka o Deoiling ， ihe oriri, ụfụfụ dị ala, biodegradable, na-adịghị egbu egbu, enweghị ihe na-emebi emebi, ọkachasị
eji na ugbo elu; Arụ ọrụ:
Detergent 01 bụ ihe ndozi nke nwere ikike emulsification siri ike maka iche iche
mmanu mmanu a na-ejikarị na ọ dị mkpa iji. Ọ kachasị adabara maka ịkụ
kpara akwa na ngwakọta ya.
Detergent 01 nwere ikike ịsa ahụ dị mma na mmetụta mgbapụta na wax na eke
paraffin dị na eriri ahụ.
Detergent 01 kwụsiri ike iji acid, alkalis, belata ndị ọrụ ya na ndị na - egbu ehi. Enwere ike iji ya na
Usoro nhicha ihe nke acidic na baticho bat di iche iche nke ndi n’enyi ocha.
A nwekwara ike iji detergent 01 mee ihe na ntanetị nke ngwaahịa nwere sịntetik
eriri, eriri ịkwa akwa na yarns
bụ ihe eji egbochi silicone softener; enwere ike iji ya na akwa dị iche iche dị ka owu na ngwakọta ya, rayon, eriri viscose, eriri sịntetik, silk, ajị, wdg. Karịrị adaba maka eriri sịntetik, naịlọn & spandex, polyester gbakwunyere, polar flea, coral velvet, PV velvet na
akwa ajị anụ. Ọ nwere ike inye akwa na-eji nwayọ, na-adị mma, na-adị ọcha ma na-acha odo odo.
Liquid Ọdịdị edo edo edo edo
● Omume Ionic adịghị ike cationic
Content ọdịnaya siri ike 60%
Acidic Mbelata Mkpocha Anya Ac-PR11 511A
bụ ogige nke ihe nnọchianya pụrụ iche, nke nwere mbelata nke ka mma
ike na oke PH uru. Ọ nwere ike dochie (sodium hydrosulfite + soda caustic) maka
Mbelata nhicha nke polyester na akwa ya na agwakọta mgbe ihichachara, wepụ ụcha mmiri, meziwanye
ngwa ngwa na akwa ahụ
Iconicity ： Nonionic
PH Bara Uru ： 7 ~ 8 (1% ihe ngwọta)
Ihe siri ike: 22%
Ngwaọrụ hydrophilic silicone 8850N
bụ obere micro-emulsion, eji mee ihe dị ka softroprolic hydrophilic maka akwa na akwa ya jikọtara ọnụ ma ọ bụ nhicha nwere nro, larịị, ọfụma, hydrophilic na ezigbo nkwụsi ike.
Ntụ ntụ Nonionic
bụ polyoxyethylene polymer complex, nke a na-eji eme ihe na - egbochi polyester, acrylic, nylon, silk, ajị na akwa ndị ọzọ gwakọtara ọnụ. Elu a na-ahụ maka eriri nwere ezigbo mgbochi mmiri, arụ ọrụ, mgbochi na-egbochi ya, na-egbochi ntụ, ma nwee ike melite arụmọrụ mgbochi na mgbochi nke akwa ahụ.